Egwurugwu Riches esi anwụde nke Gold Egwurugwu Riches esi anwụde nke Gold
Barcrest ka a tọhapụrụ ọhụrụ na usoro nke Rainbow Riches ohere mpere, na egwurugwu Riches: -Esi anwụde nke Gold oghere. Egwuregwu a nwere ihe Irish isiokwu ka gara aga ma ndị nwere ọbụna bonus atụmatụ. Ebe ọ bụ na nke a bụ a dịghị ego choro Rainbow Riches egwuregwu ị nwere ike igwu a na nnwere onwe na-enweghị echegbu onwe anyị banyere ego ego. The oghere obụrede mbụre nke a 100 paylines tinyere a ọtụtụ bonus atụmatụ na-adị Player obi ụtọ.
Barcrest bụ a oghere egwuregwu Mmepụta ahụ bụ otu akụkụ nke Scientific Games Corporation. Ọ ugbu a na-arụ ọrụ banyere 20,000 oghere igwe na UK
The No Deposit choro Rainbow Riches egwuregwu nwere 5 -esi anwụde na 100 paylines. The egwuregwu bụ playable si dị ka ala dị 50p kwa atụ ogho-eru nnọọ 100 £ kwa atụ ogho. The RTP ọnụego dị n'ụdị 94% na 98%. The egwuregwu bụ a kediegwu onye na-egwu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụfọdụ oké fun on a ala mmefu ego.
The egwuregwu na-nnọọ nke ọma e mere na akara ukwuu n'ime ịbụ isiokwu yiri. I nwere leprechauns, horseshoes, toadstools, rainbows etc. Na e nwere ndị na mbụ kaadị egwuregwu na akara dị ka obi, diamonds etc nke na-abịa agba di iche iche. The themed akara nwere elu bara uru karịa na kaadị akara.
The oghere bụ ọgaranya na atụmatụ. I nwere atọ dị iche iche iche iche nke bonus atụmatụ dị iche n'ebe anụ na akara. mbụ, e nwere ndị free spins gburugburu nke a na-triggered site na balloon ikposa. Ebe ị na-nhọrọ iji bulie otu onye n'ime anọ zoro ezo nhọrọ. The ọnụ ọgụgụ nke free spins ị ga-esi na-adabere na nhọrọ ị na-ahọrọ. Ebe i nwere ike ga-esi ruo 100 free spins. Ọzọkwa, a ịbụ a No Deposit choro Rainbow Riches egwuregwu ị pụrụ ejedebe na-emeri nnukwu ndị a free spins.
Osote, e Nwa mmụọ bonus nke a na-enweghị usoro triggered. E nwere asaa dị iche iche bonuses nke nke onye bụ ọdịda na oge. The bonuses nwere ike gụnyere mmezi wilds, multipliers, free spins etc.
Ndien ke akpatre, e nwere ndị Big nzọ nhọrọ nke bụ a ndabere bonus gburugburu ọ bụla Barcrest game. Ị na-ọdịda 5 jikọrọ spins na amara atụmatụ dị ka ihe wilds, ọzọ themed akara etc.
All ndị a jikọtara na eziokwu na nke a bụ a No Deposit choro Rainbow Riches egwuregwu nwere ike inyere aka ị na-ahapụ egwuregwu na ano karịa gị ndị mbụ mgbe ị malitere na-akpọ ya.
egwurugwu Riches: -Esi anwụde nke Gold bụ ihe kasị mma ma na Rainbow usoro si Barcrest. Ọ nwere niile Efrata ke nri ego iji mee ka ihe ụtọ oghere nke na-ị na-abịa azụ n'ihi na ihe. Ihe ọzọ mere ị ga-agbalị na ọ bụ a No Deposit choro Rainbow Riches game. Ya mere, na-online na-enye ya a atụ ogho.